ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းနှင့် စာတန်၏ကျဆုံးခြင်း | The Temptation of Christ and the Fall of Satan! | Real Conversion
ခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်း နှင့် စာတန်၏ကျဆုံးခြင်း
ဇူလိုင်လ ( ၂၉ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်
သခင်ယေရှုခရစ်သည် စာတန်နှင့်ထိပ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ထိုအကြောင်းကို မဿဲ ၄း ၁ တွင်ကြည့်ပါ။ယင်းသည် Scofield Study ကျမ်းစာတွင် စာမျက်နှာ ၉၉၇ ၌ တွေ့ရသည်။
“ထိုအခါ မာရ်နတ်၏စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို ခံနစေမည်အ ကြောင်း ဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှုကို တောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ ၍၊” ( မဿဲ ၄း ၁ )
ကြည့်ပါ။ စာတန်၏ပထမဆုံးနာမည်မှာ “နတ်ဆိုး” ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ဂရိဘာသာစကား “ဒိုင်ရာပိုလိုစ်” မှ ဘာသာပြန်ဆိုထားပြီး “လှည့်ဖြားသူ” သို့မဟုတ် “လူ့အသက်ကိုသတ်သူ” ဟု အဓိပါယ်ရှိသည်။ ခရစ်တော်သည် သွေးဆောင်ခံလျှင် “သူ့ကိုအသေသတ်” နိုင်ရန် ယေရှု ကို သွေးဆောင်သည်။ အပိုဒ်ငယ်သုံးကို ကြည့်ကြပါစို့။
“ထိုအခါ စုံစမ်းသွေးဆောင်သောသူသည် ချဉ်းကပ်၍၊ ကိုယ်တော် သည် ဘုရားသခင်၏သားမှန်လျှင်၊ ဤကျောက်ခဲတို့ကို မုန့်ဖြစ်စေ ခြင်းငှါ အမိန့်တော်ရှိပါဟု လျှောက်လေ၏။” ( မဿဲ ၄း ၃ )
စာတန်၏ဒုတိယနာမည်မှာ “သွေးဆောင်သူ” ဖြစ်သည်။ ဂရိစကားလုံး “ပက်ရာဇို” ကို ဘာ သာပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး “သွေးဆောင်သည်” သို့မဟုတ် “စုံစမ်းသည်” ဟု ဆိုလိုသည်။ ယေရှု သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲက တရားဟောရာ ၈း ၃ “လူသည် မုန့်အားဖြင့် အသက်မွေးရမည်မ ဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်အားဖြင့်သာ မွေးရမည်” ( မဿဲ ၄း ၄ ) ကို ကိုးကား ပြောဆိုသည်။
ယခုတွင် နတ်ဆိုးကလည်း ကျမ်းစာကို ကိုးကားထားပါသည်။ ဆက်စပီးယားက “နတ်ဆိုးပင်လျှင် ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကျမ်းစာကို ကိုးကားနိုင်သည်” ဟု ဆိုရာတွင် အမှန်ကို ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ နတ်ဆိုးသည် ဆာလံ ၉၁း ၁၁- ၁၂ ကို ကိုးကားသည်။ သို့သော် မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုးကားထားခြင်းမျိုးမဟုတ်။ ယေဟောဝါအဖွဲ့၊ မော်မွန်းအဖွဲ့ စသဖြင့် အယူမှားအဖွဲ့များကလည်း သမ္မာကျမ်းစာပိုဒ်ကို ကိုးကားကြသည်။ သို့သော် မှန်မှန် ကန်ကန် ကိုးကားထားခြင်းမျိုးမဟုတ်။ ယေရှုက နတ်ဆိုးကို မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်ဖြေကြားပေး ခဲ့သည်။
“ယေရှုကလည်း၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို သင်သည် အစုံအစမ်းမပြုရဟု ကျမ်းစာလာပြန်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( မဿဲ ၄း ၇ )
ထို့နောက် နတ်ဆိုးသည် ယေရှုကို တတိယအကြိမ် စုံစမ်းသည်။ ထိုသို့ စုံစမ်းရာ တွင် သူ့ကို ကိုးကွယ်လျှင် တိုင်နိုင်ငံအားလုံးကို ပေးမည်ဟု သွေးဆောင်သည်။ မဿဲ ၄း ၁၀ ကို ကြည့်ပါ။
“ယေရှုကလည်း အချင်းစာတန်၊ ငါ့နောက်သို့ဆုတ်လော့။ သင်၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ရမည်။ ထုဘုရားသခင်ကို သာဝတ်ပြုရမည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်ဟု တရားဟော ၆း ၃ နှင့် ၁၀း ၂၀ ကို ကိုးကားလျက် မိန့်တော်မူ၏။” ( မဿဲ ၄း ၁၀ )
Dr. J. Vernon McGee က “သခင်ယေရှုဘုရားသည် စာတန်ကို အဖြေပြန်ပေးရာ တွင် နှုတ်ကပတ်တော် ( ကျမ်းစာ ) ကို သုံးလေ့ရှိပါသည်။ နတ်ဆိုးက ( ကျမ်းစာ ) က ကောင်းတဲ့ အဖြေပေးသည်ဟု ထင်ဟန်ရှိပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် နောက်ကျမ်းပိုဒ်ဖတ်ရှုရာတွင် နတ်ဆိုးသည် သူ့ကို စွန့်ခွါသွားခဲ့သည်” ( မဿဲ ၄း ၁၁ )) ဟု ဆိုပါသည်။ (J. Vernon McGee, Thru the Bible, မဿဲ ၄း ၁-၁၁ မှတ်စု )
အပိုဒ်ငယ်တစ်ဆယ်တွင် ယေရှုသည် နတ်ဆိုး၏တတိယမြောက်နာမည်ကို ပေးထား ပြီး ယင်းမှာ “အချင်းစာတန်၊ ငါ့ထံမှထွက်လော့…” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ဂရိစကားလုံး “စာတန်နာ”မှ ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပြီး “စွပ်စွဲသူ” ဟူ၍ဆိုလိုသည်။ ပညတ်တော်ကို မချိုးဖျက်မည်အကြောင်း ယေရှုသည် စစ်ဆေးခြင်းကိုခံတော်မူသည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ သည် သခင်ယေရှုခရစ်ကဲ့သို့ တန်ခိုးမကြီးကြပါ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် သူ၏ဥပမာကို လိုက်၍ သူ၏စစ်သားနှင့်တပည့်တော်အဖြစ် နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ကြပါသည်။ ခရစ်တော် သည် သွေးဆောင်မှုတိုင်းကို ကျမ်းစာ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကိုးကားခြင်းအား ဖြင့် ပြန်လည်တုန့်ပြန်သည်ကို သတိပြုပါ။ ခရစ်တော်က “ကောင်းပါပြီ၊ အဲလို ငါထင်သားပဲ၊ သို့မဟုတ် ဟုတ်ပါပြီ၊ ပိုကောင်းတဲ့လမ်းရှိတယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်၊” စသဖြင့် မပြောပါ။ ယေရှုသည် နတ်ဆိုးကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ဖို့အတွက် မှန်ကန်သောကျမ်းပိုဒ်ကို အသုံးပြုထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ငြင်းပယ်သည့် လီဗရယ်ကျောင်းတွင် ဘွဲ့ လွန်ပညာကို သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ John Cagan တက်ရောက်ခဲ့သောကျောင်းကဲ့သို့ အလွန် ကောင်းသည့် ကျောင်းမျိုးတွင် တက်ရောက်ရန် ငွေမတတ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ ထိုသို့သောကျောင်း တွက် တက်ရောက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ထိုမကောင်းသည့်ကျောင်းတွင် ကျွန်တော် သင်ယူခဲ့ရသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ကိုးကားပြီး ပရောဖက်ဆာများကို ပြန် လည်တုန့်ပြန် ရမည်ဟူသောအရာကို သင်ယူရရှိပါသည်။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို အမြင်ကျဉ်း သည့် ဖန်တမင်တဲယ်ဝါဒီသမားဟု သမုတ်ကြသည်။ ထိုအရာက ကျွန်တော့်ကို စိတ်မပျက်စေ ပါ။ ကျွန်တော်သည် ယေရှုနောက်သို့လိုက်နေသည်။ ကျွန်တော်သည် သူ့တို့လူမဟုတ်ဘဲ ယေရှု၏ တပည့်တော်သာဖြစ်ပါသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့် ဤနေရာသို့ပြန်လာပြီး သမ္မာကျမ်းစာကို သင်ယူလေ့လာရန် မှာ အလွန်ပင် အရေးကြီးလှပါသည်။ အခြားအသင်းတော်များဆီ သို့မဟုတ် သမ္မာကျမ်းစာ လေ့လာခြင်းဆီသို့ ထွက်မပြေးပါနှင့်။ ထိုအစုအဝေးကို ဦးဆောင်သောသူတို့သည် သမ္မာကျမ်း စာကို ကောင်းစွာ နားလည်ခြင်းမရှိပါ။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် သင့်အား ခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ် ရန် မကူညီနိုင်ပါ။ သင်သည် ဤနေရာသို့ ဆက်လက်ရောက်ရှိလာလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် သင်တို့အား စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။ အဓိက ကျသော ကျမ်းပိုဒ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း အလွတ်ကျက်မှတ်စေမည်။ ယနေ့ ကျက်မှတ်ရမည့် ကျမ်းပိုဒ်ကို ပေးထားပါသည်။
“ကိုယ်တော်ကို မပြစ်မှားဘဲနေနိုင်မည်အကြောင်း၊ ဗျာဒိတ်တော်ကို နှလုံးထဲမှာ သိုထားပါပြီ။” ( ဆာလံ ၁၁၉း ၁၁ )
စာတန်သည် မည်သည့်အရပ်ကလာသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာ၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်ထဲက သင်တို့ကို မြင်တွေ့စေလိုပါသည်။ အားနည်းသောနယူးဧဝံဂေလိအသင်းဝင် အချို့တို့က စာတန်အကြောင်း သိဖို့မလိုဘူးဟု ထင်တတ်ကြသည်။ သို့သော် သင်သည် ခရစ် တော်၏တပည့်တော်စစ်ဖြစ်လိုလျှင် နတ်ဆိုးအကြောင်း တစ်ခုခုသိထားရပါမည်။ ဟေရှာယ ၁၄း ၁၂-၁၅ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ Scofield Study Bible ၌ စာမျက်နှာ ၇၂၆ တွင် တွေ့ရပါ သည်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ရှုကြပါစို့။
“အိုနံနက်သားမိုးသောက်ကြယ်၊ သင်သည် ကောင်းကင်က ကျ လေပြီတကား။ အပြည်ပြည်တို့ကို နှိပ်စက်သောသင်သည်၊ မြေ တိုင်အောင် ခုတ်လဲခြင်းကို ခံရလေပြီတကား။ သင်ကလည်း၊ ကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မည်။ ဘုရားသခင်ကြယ်တို့အပေါ်မှာ ငါ့ပလ္လင်ကိုငါချီးမြှောက်မည်။ မြောက်မျက်နှာဘက်၊ ဗျာဒိတ်တော် တောင်ပေါ်မှာ ငါထိုင်မည်။ မိုဃ်းတိမ်ထိပ်ပေါ်သို့ ငါတက်မည်။ အ မြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ငါနေမည်ဟု စိတ်အကြံရှိလေပြီ။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည် မရဏာနိုင်ငံ၊ သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ နှိမ့်ချ ခြင်းကို ခံရလေပြီ။” ( ဟေရှာ ၁၄း ၁၂-၁၅ )
အပိုဒ် ၁၂ တွင် နတ်ဆိုးကို “လူစီဖာ” ဟု ခေါ်သည်။ လူစီဖာဟူသည်မှာ“တောက်ပ သောအလင်း” ဟု ဟေဗြဲစကားဖြင့် အဓိပါယ်ရှိသည်။ နတ်ဆိုး၏နာမသည် “တောက်ပသော အလင်း” ဟုသိထားခြင်းက သင်တို့တွင် အချို့တို့ကို နောက်ပိုင်းတွင် နားလည်စေနိုင်ပါသည်။ အချို့သော မှားယွင်းသောခံယူချက်နှင့်ပင်္တေကုတ္တိအသင်းတော်များက “တောက်ပသောအ လင်း” ကို မြင်တွေ့လေ့ရှိကြပြီး ယင်းသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟု သူတို့က ထင်မှတ် ကြပါသည်။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ စာတန်သာဖြစ်သည်။ လူစီဖာသာဖြစ်သည်။ ၂ ကော ၁၁း ၁၄ တွင် သမ္မာကျမ်းစာက “စာတန်ပင်လျှင် လင်းသောကောင်းကင်တမန်အဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်” ဟု ဆိုသည်။ သင်သည် တစ်ဦးဦး၏ဦးခေါင်းထက်တွင် အလင်းတစ်ခုကိုမြင်လျှင် စာတန်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်လည်း မဟုတ်ပါ။ “လင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို ပြောင်းလဲ သော” စာတန်သာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ သေသောလူများသည် ကောင်းကင်သို့သွားပြီး မြေကြီး ပေါ်သို့ တဖန်ပြန်လာသောလူများအကြောင်းကို ရေးသားတင်ပြထားသည့် အလွန်ခေတ်စား သော စာအုပ်များရှိသည်။ သူတို့က ကောင်းကင်တွင် “အလင်း” ကို မြင်တွေ့ရလေ့ရှိသည် အ ကြောင်းကိုပြောကြသည်။ သူတို့သည် တကယ်တော့စာတန်၏လှည့်စားခြင်းကို ခံကြရသည်။ သူတို့က သူတို့မြင်သောစာတန်ကို အဟုတ်ထင်ပြီး ဘုရားသတ်မှတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ထိုအရာသည် ဖြစ်နိုင်စရာမရှိသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်က ဤသို့မိန့်တော်မူသည်။
“ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်စဖူး။” ( ယောဟန် ၁း ၁၈ )
သူတို့သည် “အလင်း” ကို အမှန်တကယ် မြင်တွေ့ကြလျှင် ဘုရားသခင်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ လူစီဖာ (စာတန်) သို့မဟုတ် နတ်ဆိုးတစ်ပါးပါးသာဖြစ်မည်။ လုံး၀ ဘုရားမဟုတ်ပါ။
ဟေရှာယ ၁၄း ၁၂ ကို ပြန်သွားကြပါစို့။ လူစီဖာက ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ ပစ်ချခြင်းခံရသောအခါ “တိုင်းနိုင်ငံကို အားနည်းစေသည်”။ သူသည် မူလတွင် ကောင်းကင် ဘုံ၌ တန်ခိုးကြီးသော ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်၏နေရာကို လုယူရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည်။ ဟေရှာယ ၁၄း ၁၃- ၁၅ ကို နောက် တဖန် ကြည့်ကြပါစို့။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ် ဖတ်ကြပါစို့။
“သင်ကလည်း၊ ကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မည်။ ဘုရားသခင် ကြယ်တို့အပေါ်မှာ ငါ့ပလ္လင်ကိုငါချီးမြှောက်မည်။ မြောက်မျက်နှာ ဘက်၊ ဗျာဒိတ်တော် တောင်ပေါ်မှာ ငါထိုင်မည်။ မိုဃ်းတိမ်ထိပ် ပေါ်သို့ ငါတက်မည်။ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ငါနေမည် ဟု စိတ်အကြံရှိလေပြီ။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည် မရဏာနိုင်ငံ၊ သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ နှိမ့်ချ ခြင်းကို ခံရလေပြီ။” ( ဟေရှာယ ၁၄း ၁၃ - ၁၅ )
Scofield ၏မှတ်စုတွင် စာမျက်နှာ ၇၂၆ အောက်ပိုင်းကို ကြည့်ကြပါစို့။ “အပိုဒ်ငယ် ၁၂-၁၄ သည် စာတန်ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအံ့ဩဘွယ်ကောင်းသည့် စာပိုဒ်သည် စကြာဝဠာထဲ၌ အပြစ်၏အစပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူစိဖာက“ငါ..လိမ့်မည်” ဟု ဆိုသောအခါ အပြစ် သည် စတင်ခဲ့ပါသည်။” ယခုတွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၂း ၉ ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ယင်းသည် ကျမ်းစာ၏အဆုံးပိုင်း စာမျက်နှာ ၁၃၄၁ တွင်ရှိပါသည်။ နောက်ကလိုက်၍ ဖတ်ရှုကြပါ။
“ထိုအခါ၊ ဤလောကတနိုင်ငံလုံးကို လှည့်ဖြား၍ မာရ်နတ်စာတန် အမည်ရှိသော ရှေးမြွေဟောင်းတည်းဟူသော နဂါးကြီးကို၎င်း၊ သူ နှင့်အတူ သူ၏တမန်တို့ကို၎င်း၊ မြေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏။” ( ဗျာ ဒိတ် ၁၂း ၉ )
ဤနေရာ၌ နဂါးဟူသည်မှာ လူစီဖာ၊ စာတန်ပင်ဖြစ်သည်။ “ရှေးမြွေဟောင်းတည်းဟူသော၊ မာရ်နတ်နှင့်စာတန်” ဟု ဆိုပါသည်။ခေတ်သစ် ကျမ်းစာပညာရှင်များက ဤသည်မှာ ကမ္ဘာ ကြီးအဆုံးသတ်တွင် အခြားစာတန်ကို ပစ်ချခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤသည် က ဟေရှာယ ၁၄ တွင်တွေ့ရသော စာတန်ပစ်ချခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြရာတွင် အထောက် အကူပေးပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ် စာတန်ရောက်လာရာနေရာကို သိစေမည်။ အပိုဒ်ငယ်၉တွင် “သူ၏အပေါင်းအပါတို့ကို သူနှင့်အတူ ပစ်ချတော်မူသည်” ဟု ဆိုထားပါသည်။ ပုန်ကန်မှုပြု သော ဤကောင်းကင်တမန်များသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ယေရှုနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သော နတ်ဆိုးများဖြစ်လာကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၂း ၉ ကို မှတ်သားရန် အခြားစကားစုမရှိတော့ ပါ။ “စာတန်သည် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို လှည့်ဖြားသည်။”
Winston Churchill သည် ဘုရားကျောင်းတက်တတ်သည့် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးမဟုတ် သော်လည်း နတ်ဆိုရှိကြောင်းကိုတော့ သဘောပေါက်သည်။ Churchill က နတ်ဆိုးသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၌ ဟစ်တလာနှင့်ဂျာမနီစစ်တပ်နောက်ကွယ်တွင် တည်ရှိသည်ကို သိရသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သူသည် ဟစ်တလာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး လုံး၀ မယူနိုင်ခဲ့ပါ။ Chamberlain, Lord Halifax နှင့် “ချော့မော့သူများ” က ဟစ်တလာနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ သို့သော် Churchill က ဤကမ္ဘာကြီးရှိနတ်ဆိုး၏တန်ခိုးကို ရတန့်ရမည်၊ သို့မ ဟုတ်လျှင် “ခရစ်ယာန်နိုင်ငံသား” Churchill သမုတ်ထားသည့်အရာ၏အဆုံးသတ် ရောက်ရှိ သွားပေလိမ့်မည်။
သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့သည် ခရစ်တော်၏တပည့်တော်အနေဖြင့် တိုက်ခိုက်ရမည်။ ကျွန်တော်၏လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက် Rev. John Cagan က ကျွန်တော်တို့ရန်သူ- မာရ်နတ် အ ကြောင်းကို ယနေ့ည ၆း ၁၅ တွင် ဟောပြောမည်။ ကျွန်တော်တို့အတွက် စားကောင်းသောက် ကောင်းရှိမည်။ သင်းအုပ် John ထံက တရားဒေသနာကိုလည်း ကြားနာကြရမည်။ ညနေ ၆း ၁၅ တွင် ဤနေရာသို့ အရောက်လှမ်းခဲ့ပါ။
အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီးလူသာ၏ ဓမ္မသီချင်းဖြစ်သည့် “ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ရဲ တိုက်” သီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။ သင်တို့စာရွက်တွင် သီချင်းနံပါတ် တစ်တွင်ရှိသည်။ အားလုံး မတ်တပ်ရပ်ပြီးသီဆိုကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့ရန်သူကြီးက မကောင်းမှုဖြစ်စေရန် လိုက်၍ရှာသော်လည်း၊
“ဘုရားရှင်ခိုလှုံရာရဲတိုက်” ၊ (Martin Luther ,၁၄၈၃-၁၅၄၆ ရေးစပ်သည်။ )